Isla Email Xanuun Suuqgeynta ... 10 Sano Kadib. | Martech Zone
Isla Xanuunka Suuqgeynta Emailka… 10 Sano Kadib.
Talaado, Oktoobar 18, 2011 Khamiista, Sebtember 19, 2013
Waxaan ku dhacay wadada usbuucii hore si aan u booqdo a Delivra macmiil oo ka hadal goobta Ururka Ganacsiga dhacdo ka dhacday Providence, RI. Waxa aan bartay waa… iibiyeyaasha emailka waxay leeyihiin dhibaatooyin la mid ah kuwii ay 10 sano ka hor sameeyeen markii aan bilaabay ganacsigan. In kasta oo horumarka tikniyoolajiyadda iyo korsashada, haddana suuqleyda nolosha dhabta ahi maalin walba waxay la halgamayaan istaraatiijiyado dhismo oo liis ah, ka qayb qaadasho, cabir, soo bandhigid, sicirka furan iyo xeeladaha kale ee aasaasiga ah ee emaylka. Waxaan ku jiray guddi ku saabsan xeeladaha dhismaha liistada aasaasiga ah qolkiina waa la buuxiyay room qolka taagan oo keliya!
Warka weyn, marka la barbardhigo meeshii aan joognay 10 sano ka hor, ayaa ah inay jiraan hanti aad u tiro badan oo aqoon, tirakoob iyo khibrad leh si gacan looga geysto xallinta dhibaatooyinkaas. Marar badan, waxa aan helay, ayaa ah in suuqgeeyayaasha emailku ay yihiin kuwo caqli badan, runtii caqli badan. Waxay leeyihiin aqoon iyo xeelad ay ku abuuraan ololeyaal email oo waaweyn; waxay kaliya u baahan yihiin kheyraad ka wanaagsan haddii ay ahaan lahayd lacag, shaqaale ama waqti.
Waxaan aad u xiiseynayaa inaan ka ogaado kooxdan… waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee aad la kulantay barnaamijyada emailkaaga? Ma tahay:
Samee emayl saaxiibtinimo leh